विश्वकप छनोटमा अष्ट्रेलियासंग खेल्दा रोहित चन्दलाइ रातो कार्ड, – Khabar Patrika Np
६ वर्षको उमेरमा नै सिक्स प्याक बनाएर विश्वभर चर्चामा यी बालक
यिनै कलिला मुनाहरुको पहिरोले लियो ज्यान फोटो छोएर रिप लेखनुहोला
नातिसहित दुई बुहारीको मृ,त्यु
घरमा साङ्ग्ला छन् भने बुझुनुहोस हजुरलाई यो रोग छिट्टै लाग्दैछ।बेवास्ता नगरी ध्यान दिएर एकचोटी पढीहाल्नुहोस
विश्वकप छनोटमा अष्ट्रेलियासंग खेल्दा रोहित चन्दलाइ रातो कार्ड,
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २८, २०७८ समय: २३:४३:३९
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीविरुद्ध विश्वकप तथा एसियन कप छनोटको खेल अन्तर्गत पहिलो हाफमा अष्ट्रेलियाले २-० को अग्रता लिएको छ । अष्ट्रेलियाले बल पोसेसनमा वर्चस्व जमाएको पहिलो हाफमा निकै आक्रमण बुनेको थियो । सुरुवातमा नै अग्रता लिएपछि अष्ट्रेलियाले पोसेसनमा ध्यान दिँदै आक्रमण बुनेको थियो । पहिलो हाफको अन्त्यतिर रोहित चन्द रातो कार्ड खान पुग्दा नेपाल १० खेलाडीमा सिमित भएको छ ।
प्रशिक्षक अलमुताइरीले आजको खेलमा मिडफिल्डमा दुई सहित कुल ५ खेलाडी परिवर्तन गरेका थिए । गोलरक्षकमा कप्तान किरण चेम्जोङ तथा सेन्टर डिफेन्समा अनन्त तामाङ र रोहित चन्दले नै निरन्तरता पाए। अघिल्लो खेलमा विकास घाइते भएपछि डिफेन्समा झरेका सुमनले आज सोहि पोजिसनमा रहेर सुरुवात गरे । गौतम श्रेष्ठले राइट ब्याकमा खेलिरहेका छन् ।
मिडफिल्डमा पुजन उपरकोटीलाई एरिक विष्ट र विशाल राईले साथ दिएका छन् । आक्रमणमा नवयुग श्रेष्ठले सुमन लामा र सुनिल बलको साथ पाउनेछन् । श्रोत (हाम्रो खेलकुद) तस्विर तल हेर्नुहोस
किन यस्ता मानिसको हातमा टिक्दैन धन-सम्पति ? यस्तो छ कारण !
बिहान उठ्नासाथ यस्तो १० चीज देख्नुभयो भने सोच्नुहोस ! मिल्दैछ अचानक धनलाभ
देखने बित्तिकै ॐ लेखी एक सेयर गरि दर्शन गरौ